Tommy Möller: Wakhti kordhinta Löfven waa la sugayey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stefan Löfven iyoTommy Möller sawir: Anders Wiklund/TT och Pi Frisk/TT.
Tommy Möller: Wakhti kordhinta Löfven waa la sugayey
La daabacay måndag 3 december 2018 kl 11.51
Kordhinta wakhtiga ee ra'iisal wasaare Stefan Löfven si uu dowlad u soo dhiso ayaa aheyd wax la sugayey sida uu sheegay Tommy Möller, ahna aqoonyahan cilmiga siyaasadda isagoo u waramayey idaacadda P1-morgon.
Waxey aheyd shalay markuu afhayeenka baarlamanka, Andreas Norlén sheegay inuu ra’iisal wasaaraha u kordhinayo wakhtiga soo dhisidda dowladda.
Tommy Möller oo ah barafasoor cilmiga siyaasadda kana howl-gala jaamacadda Stockholm ayaa sheegay haddii ay xisbiyadu ku guuldareysataan iney wax ka qabtaan xaaladda taagan iminka ay taasi horseedi doonto doorasho cusub.
Tommy Möller ayaa sheegay in wakhti kordhinta Stefan Löfven ay aheyd wax la sugayey.
–Wakhtiga ayaa yaraa iyadoo arimaha laga wada hadlayana yihiin kuwa adag. Waxa laga wadli doonaa xisbiyada ka mid noqonaya dowladda, ayuu yiri Tommy Möller.
Tommy Möller ayaa u arka iney ra’iisal wasaaruhu u muuqato fursad uu xisbigiisu ku soo dhiso dowlad socialdemokraadi ah. Waxa kaliyoo hubaala inuu wadahadal u socdo xisbiyada.
–Annie Lööf ayaa la timid shuruuddo kama danbeys ah. Taas ayey ku muujisay shuruudaha wadahadalka ay soo bandhigtay, ayuu yiri Tommy Möller.
Xaaladda cakiran ayaa keeneysa in socialdemokraterna ay ku guda jiraan wadahadal adag ayuu yiri Tommy Möller.
–Su’aalaha iyo shuruudaha horyaala socialdemokraterna ayaa ah kuwo adag. Wadahadalada noocana ee adag waxey keenaan su’aalo cusub iyadoo ajandaha wadahadalka lagu kordhiyo su’aalaha cusub. Taas ayaa keeni karta iney fududaato sidi loo heli lahaa xal ay dhinacyada ishorfadhiyaa ku wada qancaan.
Tommy Möller ayaa sheegay in haddii lagu guuldareyso xalinta xaaladda taagan iminka ay taasi horseedi doonto doorasho cusub.